IJammy Jellyfish, Ubuntu 22.04 sele inegama lekhowudi | Ubunlog
Ubuntu 22.04 sele inegama lekhowudi: "Jammy Jellyfish".
Ukufika emva kwexesha sipapasha Iindaba ebekufanele ukuba sizithumele izolo okanye namhlanje: umhla wokukhutshwa Ubuntu 22.04, xa into eqhelekileyo ibiya kuba kukuba bayibhengezile emva kokufika kuka-Impish Indri. Into esele ifike ngokwesiqhelo ngamanyathelo athatyathiweyo ukusukela ngoku ukuya phambili, anje ngeDaily Live yokuqala ukumiliselwa okanye ukukhutshwa kwegama lekhowudi.
Njenge Siyakwazi ukufunda KwiLauchpad, Ubuntu 22.04 iya kuba negama lekhowudi elivakala kamnandi: IJammy jellyfish. Ukubeka oku kungasentla kwi Isiguquleli sikaGoogle I-DeepL, siyabona ukuba yi "jellyfish jam", kwaye ukubhala ukuba emva kwentsimbi yesi-17 kuye kwandilambisa. Nangona ingafani ncam, ndinentlanzi entlokweni yam, kwaye ijam indenza ndicinge ukuba yi… andazi, kodwa kufanelekile.
Ubuntu 22.04 izakufika ngegama lekhowudi iJammy Jellyfish ngo-Epreli 22, 2022
EUnited Kingdom Igama "jammy" likwasetyenziselwa ukubhekisa kwinto enethamsanqa. Ke ngoko, kwaye xa sijonga ukuba asikaze sitye naziphi na izilwanyana zase-Ubuntu, sinokukhetha phakathi kwe-jellyfish okanye leyo inethamsanqa, kodwa ndicinga ukuba ukhetho lwesibini luchaza ngcono ukuba i-Canonical inantoni na engqondweni.
Ngokumalunga nokuba iya kuba yintoni, iya kuqala ukukhula kwayo kungekudala, kodwa iya kusebenzisa ingxelo ehlaziyiweyo ye-GNOME (41 okanye 42), i-kernel entsha, mhlawumbi inguqulelo ye-LTS elandelayo ye-kernel, Isifaki esitsha esisekwe kwi-Flutter kunye neFirefox kuhlobo lwayo lwe-snap lwe-Ubuntu kunye nazo zonke iincasa zalo ezisemthethweni nezingafanelekanga. Ukuqaliswa kwayo kucwangciselwe 22 April 2022, kwaye iyakuba luhlobo lweLTS oluxhaswayo iminyaka emi-5, kude kube ngu-2027. Kwiiyure ezimbalwa okanye kwiintsuku ezizayo iDaily Live iyakupapashwa kwabo bafuna ukwazi zonke iindaba kuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu 22.04 sele inegama lekhowudi: "Jammy Jellyfish".
I-KDE ilungiselela ukuphucula izinto ezininzi kwiPlasma 5.24